Akara Pokémon maka XFCE | Site na Linux
Akara Pokémon maka XFCE
obi ike | | Ọdịdị / Nhazi
Ọtụtụ n'ime anyị na-echeta na n'oge ezumike anyị ga-amalite igwu egwuregwu Pokémon, anyị ga-azụ ha ma na mbipụta ọla ọcha na nke ọla edo anyị ji cloned ha ka anyị nwee ndị agha anyị nke Dragonite na Celebi n'ogo 100.
Ọfọn, maka ndị na-adị ochie ka ha kpọọ egwuregwu vidio mana ndị na-achọ icheta oge ndị a, ma ọ bụ maka ụmụaka Linux anyị nwere mkpọ Pokémon akara ngosi maka XFCE:
Enwere ike ibudata mkpọ ahụ ebe a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Akara Pokémon maka XFCE
Enwere m Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda: 3
jide ha niile!
Ọfọn, n'agbanyeghị afọ ole m ga-enweta, m ka jupụta ụwa Pokémon ... echetara m mgbe m nwetara Blue Pokémon maka Game Boy azụ na 2000 ... na obere oge ka ọlaọcha rutere ... n'ehihie nke m ejiriwo ọzụzụ, ndakpọ ndị na-emegide ya, na akụkụ nke kachasị amasị m, nke na-eme nchọpụta, na-edozi ihe omimi na ịchọ akụkọ akụkọ Pokémon ...
Taa, m dị afọ iri abụọ na ise, m ka na-ewepụkwa oge m maka egwuregwu Pokémon, mgbe afọ ole na ole nke hiatus xD gasịrị, aga m emecha Emerald Pokémon, mgbe ahụ, m ga-amalite na Red Fire: P, ihe ọjọọ bụ na dị ka ọ dị ugbu a, m na-eme ya site na emulator (ọ dị ọnụ ala karịa, gịnị kpatara anyị ga-eji aghugho) n'ihi na enweghị m ike ịnweta Pokémon naanị nke na-apụta naanị na mbipụta ndị ọzọ ¬¬ ... mana hey, ahụmịhe ahụ ka na-akwụghachi ụgwọ maka nwata di na m 😛
Akwụsịrị m egwuregwu vidio na 15, mana ruo mgbe ahụ na Pokémon.
Ihe ojoo bu Pokémon nke ị gha eji Ori Tiketi na ndi ozo, na iga agha ihe iji nweta tiketi ahu.
Ihe dị… M na-ahụ egwuregwu vidio maka ụmụaka ruo 12 afọ, adịla m anya ochie maka ihe ndị ahụ.
Site n'ụzọ, ịnabata Carcamal Club
Ọ dị mma, echere m na enwere egwuregwu vidio maka ọgbọ niile (n'eziokwu, enwere), na hel, ọ bụrụ na ọ na-eme gị oge dị mma, gịnị kpatara ya?
Banyere obere Pokémon nke enwere ike ịnweta site na ihe omume, dị ka Mew, ma ọ bụ Deoxys, ma ọ bụ Lugia na Ho-Oh, enwetara m na Esmeralda site na iji egwuregwu dị na emulator, yana obere aghụghọ nke kacha mma. Nchọpụta m meworo, emere maka Pokémon bụ egwuregwu egwuregwu na ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ ya, ọ bụrụ na Pokémon gị meriri n'ọgụ, ọ ga-enweta ahụmịhe na-enweghị njedebe ruo mgbe ị kwụsịrị ya ... ma ọ bụ obere candies ma ọ bụ mmiri ara ehi, nke a bụ ihe kachasị mma, amaghi awa na awa na awa nke ozuzo azoputara m 😛
Kedu emulator ị na-eji? Desmume di nkpa na igwe okwu ...
Eji m GameBoid (Game Boy Advance emulator) na ekwentị gam akporo m, nke ahụ bụ ebe m na-egwu ya, ọ dị ka igwu egwu na Game Boy nke ndụ xD
M na-eji ezigbo Egwuregwu Nwa, n'ihi ya, m ga-aga ihe omume ahụ.
Anaghị m egwu ihe ọ bụla ọzọ n'ihi nsogbu nke ọzịza, nke m na-ebili na-ewe iwe
Kedu ihe na-efu Team Team?
Ka anyị kwuo okwu nke ọma, Team Rocket, ọ bụrụ na ịgaghị aga RAE nke Pokémon hahahaha
Pokémon 😀 Chukwu ihe ncheta ... Abụ m otu n'ime ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ha na Nintendo DS buuru egwuregwu Pokémon Pearl mbụ ma ọ bụ jiri GBA ha a Fire Red katrij: 'D Ma ugbu a, iji cheta oge ndị ahụ, mụ na ụfọdụ ndị enyi na-aga izute e na Monday maka a mini ndorondoro… Ma ugbu a, njedebe nke anya isiokwu.
Abụ m naanị weirdo na-adịghị amasị Pokemon otu bit? O_O ...
Nope, enwere anyi abuo.
LOL !! ọ bụghị nke a ma ọ bụ nke ọzọ Digimon, ma ọ bụ ndị na-agwụ na -mon Achọrọ m ha LOL !!
Nke ahụ bụ otu Pokémon na dịka shitty, opekata mpe anime
Digimon dị mma na oge mbụ ...
N'ebe ahụ, a na-echekwa ya, ọbụnakwa na nke abụọ, mana nke atọ bụ shit na ị na-atụ ụjọ, enweghị isi
Anyị abụrụla 2
Mụ na ya nwere 4. Enwere m mmasị na ya n'oge m bụ nwata mana ugbu a ọ dị ka onye nzuzu nke ukwuu nke na aghọtaghị m otu ọ si ewu ewu.
Dị nnọọ iche na Digimon, nke na-adịghị ka KZKG ^ Gaara, enwere m mmasị na usoro ole na ole rụzuru ya; mana naanị oge mbụ, ndị ọzọ niile bụ ahịhịa nke Pokémon ma ọ bụ njọ. 😛
Onye na-agbaji ụbụrụ m bụ…. taratatánnnn ... Yu-gi-go..
Yu Gi Gi
Agbanyeghị na enwetabeghị m ka esi ghọta kd ndị kaadị ndị ahụ, ebe ọ bụ na ejiji ahụ apụtakwa n'oge ezumike
Ok naghị amasị Pokémon n'ezie? Chei, m ka na-echeta ụtụtụ ndị ahụ mgbe m biliri n’elekere asaa nke ụtụtụ iji lee ya na TV! Hahahaha, na etu m si anya isi mgbe m nwetara pokémon nile na Pokémon Gold! XD
Na-aza ndị ọzọ posts, Digimon adịghị njọ, ihe na-eme bụ na ogbenye ahụ na-agbada ...
Elav! Mgbe obula ichoro, aga m eti gi aka Yu-Gi-Oh!, M ka na-edebe oche m n’ime igbe akpukpo ukwu! HA HA HA HA HA HA HA
Ee, ihe geek m… Ọ dịghị onye na-egwu Ime Anwansi, nri? LOL
Onye ọ bụla? Go imi ... Enweghị m Gold, enwere m ọlaọcha mana enwetaghị m ha niile ...
Ihe na-eme bụ na anyị emeela agadi ịhụ ihe a, mmadụ, ị ga-aghọta ya.
Yu Gi Oh, Amutabeghị m egwu nke ọma, m na-egwuri egwu otu oge na kaadị m niile m nwere, nke m jidere hahaha.
Na Ime Anwansi, enwetaghị m omume ahụ
Hahahaha, ee, enwere m ike inweta ha niile (mgbe m gbusịrị obere nwanne nwanne m ma dọwaa ya, MUAHAHAHAHA)
Adị m afọ iri abụọ na mkpanaka m nwere emulators maka PS One, N20 na Game Boy, nwere egwuregwu dịka Zelda, Pokemon ma ọ bụ Digimon… too gabigaghị oke maka ihe ndị a!
Ime anwansi abụghịkwa mkpọtụ ebe a, mana otu enyi kụziiri anyị ka anyị kpọọ ma n'ikpeazụ anyị nwetara ole na ole, ọ bụ ezie na ndị mmadụ na-eleda gị anya maka ịkpọ "egwuregwu ụmụaka", mgbe Ime Anwansi bụ usoro egwuregwu emere maka ihe karịrị afọ 13
Echetara m na m rịọrọ nwa nwanne nna m maka ọkwa Pokémon nke 100 ka o jiri ọlaọcha mechie ha, ọ wedara m ala mana mgbe ahụ ọ hapụrụ m hahaha.
Akwụsighị m igwu egwu n'ihi afọ ndụ, mana n'ihi na Ebe Egwuregwu anaghị ejide m egwuregwu, mgbe ahụ iwe were m wee sị.
Anaghị m egwu egwuregwu vidio ọ bụla ná ndụ m
Ma nke a bụ na 15.
Enweghị m egwu ọ bụla ọzọ maka ihe abụọ:
1: Ana m eri ahụ ma mgbe ahụ m na-ebili na shit na piss
2: Ahụrụ m egwuregwu ahụ dịka ụmụaka, n'agbanyeghị afọ ole, ana m ahụ ha ọ kachasị maka afọ 12, site na mgbe ahụ gaa n'ihu, m na-eche na onye ọ bụla toro eto na-egwu obere egwuregwu.
Agwara m gị site na nkata, afọ 20 = carcamal hahahahahahahahaha
Enwetara m 150 nke mbipụta Blue, mana na Silver ... n'agbanyeghị inwe Mew na Celebi, akwụsịrị m na 230-ihe ...
Ma ugbu a, m na-egwu Emerald mbipụta na emulator, n'etiti eziokwu na enweghị m ike ịgbanwe na na achọrọ m nkume ... nke ọma, wepụ 386 nke mbipụta a n'isi m, mana hey, enwere m 153 maka ugbu a. ọ bụ ihe xD
Mmadu enwere ike igwa m otu esi etinye ya na ubuntu ya na desktọọpụ XFCE Abụ m onye hụrụ pokemon n'anya biko nyere m aka
Zaghachi Ivan Morrison
Paste anyị na-agbanwe imewe ntakịrị